Hello Nepal News » च्याम्पियन्स लिगमा स्वारेजको हालत खराब : ७ वर्षमा ० गोल !
च्याम्पियन्स लिगमा स्वारेजको हालत खराब : ७ वर्षमा ० गोल !
स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडका उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेज गत समर सिजनमा बार्सिलोनाबाट फ्री ट्रान्सफरमा मड्रिड पुगेपछि राम्रो लयमा छन् । ला लिगामा उनले २४ खेलबाट १८ गोल र २ असिस्ट गरेका छन् । समग्रमा उनले २९ खेलबाट १८ गोल र २ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । स्वारेजले गरेका सबै गोल र असिस्ट ला लिगामै गरेका हुन् । च्याम्पियन्स लिगमा उनले यो सिजन ६ खेल खेले पनि न १ गोल गर्न सके, न त १ असिस्ट नै । गत राति एथ्लेटिको इंग्लिस क्लब चेल्सीसँग समग्रमा ३–० ले पराजित हुँदै अन्तिम १६ बाटै आउट भयो । गत रातिको दोस्रो लेगमा एथ्लेटिको चेल्सीको घरमा २–० ले पराजित भयो । ला लिगाको लिग लिडर च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएपछि खेलाडी र प्रशिक्षकको आलोचना सुरु भएको छ ।
आलोचना खेप्नेहरूमध्ये एक खेलाडी स्वारेज पनि हुन् । गत राति स्वारेज चेल्सीविरुद्ध सुरआताटै खेलेका थिए । तर, प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीले उनलाई खेलको ५९औं मिनेटमा सब्सिच्युट गरेका थिए । स्वारेजलाई एन्जल कोरेरियाले प्रतिस्थापन गरेका थिए । चाँडै मैदान छाड्नुपर्दा स्वारेज स्पष्टै देखिने गरी रिसाए । मैदानबाटै असन्तुष्टि पोख्दै हिँडेका उनले बेन्चमा पुगेर पनि अस्वभाविक हर्कत देखाइरहे । उनले जुत्ता र मोजा खोलेर रिसले फालेको दृश्य भिडियोमा कैद भयो भने केहीबेरपछि उनले जर्सी पनि खोलेर फालेका थिए । मैदानमा सोचेजस्तो प्रदर्शन हुन नसक्नु र प्रशिक्षकले चाँडै मैदानबाट निकाल्दा स्वारेज रुष्ट बनेका थिए । सो कुरा उनले बाहिर देखिने गरी नै पोखे ।
चेल्सीविरुद्ध नतिजा उल्ट्याउनुपर्ने दबाबसहित उत्रिएको खेलमा स्वारेजको व्यक्तिगत प्रदर्शन बिर्सनालयक रह्यो । ५९ मिनेटसम्म खेल्दा उनले न गोल गर्न सके, न असिस्ट गर्न सके, न त एउटा अवसर नै सिर्जना गर्न सके । यतिसम्म कि, चेल्सीको पोस्टमा उनले एकपटक पनि अन टार्गेट प्रहार गर्न सकेनन् । जम्माजममी उनको एक प्रहार पनि अफ् टार्गेट थियो । उनका दुई ड्रिब्लिङ प्रयास दुवै असफल भएका थिए । उनले ५९ मिनेटभरिमा जम्मा १९ पटक मात्रै बल छुन पाएका थिए । बरु, उनले ७ पटक आफ्नो खुट्टाबाट बल गुमाएका थिए । यस्तो फितलो प्रदर्शनका कारण प्रशिक्षक सिमोनीले स्वारेजलाई चाँडै मैदानबाट निकाले । तैपनि, एथ्लेटिकोको आक्रमणमा सुधार भएन । र, आफूले २ गोल खाँदा १ गोल पनि गर्न नसकी टिम २–० ले पराजित भयो । टिम प्रतियोगिताबाट आउट भएपछि सो खेल दौरान स्वारेजको प्रदर्शन र हर्कत भने समाचार बन्यो ।
२०१५ पछि अवे मैदानमा छैन १ गोल पनि !
च्याम्पियन्स लिगमा स्वारेजको समग्र रेकर्ड राम्रै छ । यस प्रतियोगितामा उनले आजसम्म १०६ खेलबाट ४६ गोल गरेका छन् । बार्सिलोनामा ६ वर्ष रहँदा उनले कूल ५५ खेलबाट २५ गोल गरेका छन् । तर, यस प्रतियोगितामा स्वारेज अवे मैदानमा सधैं खराब बन्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा इंग्लिस क्लब लिभरपुलबाट बार्सिलोना पुगेपछि स्वारेजले सन् २०१५ यता आफ्नो क्लबको घरेलु मैदानदेखि बाहिर अवे मैदानमा १ गोल पनि गर्न सकेका छैनन् । विश्वका एक स्टार फरवार्डका लागि यो निकै खराब रेकर्ड हो । ३४ वर्षका स्वारेजले च्याम्पियन्स लिगका खेलअन्तर्गत अवे मैदामा १ गोल गर्न नसकेको ७ वर्ष भइसकेको छ । बार्सिलोनाजस्तो एक सफल र ठूलो क्लबमा रहेर पनि स्वारेजका नाममा यस्तो रेकर्ड रहनु निकै खराब रहेको मान्न समस्या नहोला ।
तथ्यांक नै हेर्दा पनि च्याम्पिन्स लिगका पछिल्ला ७ वर्षमा अवे मैदानमा १ गोल पनि नगर्ने स्वारेज एक मात्रै सेन्टर फरवार्ड हुन् । सन् २०१५ यता स्वारेजले अवे मैदानमा २५ खेल खेले पनि यी खेलमा लगातार गोलविहीन बनेका छन् । उनले यस प्रतियोगिताको अवे मैदानमा अन्तिमपटक २०१५ को सेप्टेम्बरमा बार्सिलोनाले इटालियन क्लब रोमासँग उसकै घरमा १–१ को बराबरी खेल्दा सो खेलमा स्वारेजले नै गोल गरेका थिए । स्वारेजले त्यसबेला अवे मैदानमा १ गोल गरेयता आजका दिनसम्म च्याम्पियन्स लिगका खेलअन्तर्गत अवे मैदानमा १ गोल गर्न नसकेका हुन् । गत राति चेल्सीको घरमा खेलिरहँदा स्वारेज निकै निराश, रुष्ट र आक्रोशित देखिन्थे । सम्भवतः उनलाई यही कुराले पनि तनाव बढाएको थियो होला । किनभने, उनी अवे मैदानमा आफ्ना नाममा रहेको ७ वर्ष लामो गोलको खडेरी अन्त्य गर्न चाहन्थे । तर, हुन सकेन ।
प्रकाशित मिति ५ चैत्र २०७७, बिहीबार १५:४०